Indlela ukuxhumanisa bamba futhi mpintsha?
Ungabambisana kanjani ne-clutch ne-throttle? Okokuqala, igiya kufanele libe sesimweni sokungathathi hlangothi. Ngemuva kokuqala imoto, cindezela i-clutch kuze kube sekugcineni, bese ufaka igiya endaweni yokuqala yegiya. Bese ukhulula ibhande. Lapho uxegisa i-clutch, yehlisa. Whe ...
Kuthiwa ama-brake pads awalungiswa ukuthi azoyiguqula kangaki. Kuya ngezimo zokushayela nemikhuba yokushayela. Le mikhuba izothinta ukusetshenziswa kwama-brake pads. Uma ukwazi ukuyazi kahle, uzothola ukuthi ezimweni eziningi asikho isidingo sokunyathela i-b ...
Ukuhlanganiswa kwendawo yonke kusebenzisa izici zendlela yayo i-torque nokunyakaza kungadluliselwa ngokuthembekile. Izici zokuhlangana kwendawo yonke yilezi: isakhiwo sinama-engeli ahlukile angena, futhi ama-axial amabili afaka ama-engeli we-unive ...